शिवम सिमेन्टको आइपीओ बाँडफाँड, कसलाई कति कित्ता पर्यो ? — Arthatantra.com
Arthatantra.com > Headline > शिवम सिमेन्टको आइपीओ बाँडफाँड, कसलाई कति कित्ता पर्यो ?
शिवम सिमेन्टको आइपीओ बाँडफाँड, कसलाई कति कित्ता पर्यो ?
काठमाडौं। शिवम सिमेन्टको आइपीओ बाँडफाँड भएको छ। बुधबार बिहान बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलले आइपीओको बाँडफाँड गरेको हो ।सो क्रममा आइपीओ खरीदका लागि आवेदन दिएका सबैले सेयर पाएका छन् । यसभन्दा माथि १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिएका सबैलाई ५ हजार ६४० कित्ताका दरले सेयर दिइएको छ ।
बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटलको अनुसार शिवमको आइपीओमा ५० कित्तादेखि अधिकतम ५ हजार ६४० कित्तासम्म आवदेन दिने सबैले मागेजति सेयर पाएका हुन् । यसरी बाँडफाँट गर्दा बाँकी रहेको ११५ कित्ता सेयर ५ हजार २२० कित्ताभन्दा बढी माग गर्नेमध्ये गोलाप्रथाबाट ११ जनालाई १० कित्ता थप गरिएको छ । बाँकी रहने ५ कित्ता सेयर पनि सोही रेन्जमा आवेदन दिएकामध्ये ५ जनालाई १ कित्ताका दरले थप गरिएको छ ।
कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि ४४ लाख ३४ हजार ६९५ कित्ता आइपीओ निष्काशन गरेको थियो। आइपीओमा १.१७ गुणा बढी आवेदन परेको थियो । प्रभावित क्षेत्रमा बिक्री नभएको ९४ हजार ३३५ कित्ता समेत सर्वसाधारणलाई बाँडफाँड गरिएको हो ।
२०७५ फागुुण २२ गते १२:३७ मा प्रकाशित
आइएमई जनरलको १ लाख कित्ता सेयर लिलामी खुल्यो, कहाँवाट दिने आवेदन ?
अबको २५ बर्षमा नेपालीको प्रति ब्यक्ति आय साढे १२ हजार डलर
विदेश जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? तपाइ पनि लिनुहोस् स्मार्ट लाइसेन्स !
ज्योति लाईफको ६६ करोडको आइपिओ निष्काशन अन्तिम चरणमा, कती पुग्छ पुँजी ?
लघुविद्युत योजना बन्द, करोडौं लगानीकर्ता अन्योलमा
माथिल्लो तामाकोशीको आइपीओ आजदेखि, ५० देखि १ हजार कित्तासम्म भर्न पाइने